Ka fogaanshaha guriga: tilmaamaha bixitaanka xilliyada masiibada | Ragga Stylish
Lamaanaha iyo Galmada
Ka maqnaanshaha guriga: tilmaamaha bixitaanka xilliyada masiibada
Isaac | | nololeedka
La SARS-CoV-2 faafa waxay gaadhay inta badan wadamada. Qaarkood waxay ku sii wadaan xasuuq aad u sii cad, sida ka dhacday Talyaaniga iyo Isbaanish. In kasta oo ay ku xiran yihiin, dadka qaar waxay u baahan yihiin inay ka baxaan guriga. Ama inaad aado shaqadaada, ama aad u adeegato, ama aad aado dhakhtarka. Laakiin daqiiqadahaas waxaad isku muujineysaa inaad karti u leedahay inaad qaadsiiso qof haddii aad tahay side fayraska ama aad qaadi karto haddii aadan qaadin tallaabooyinka ku habboon.
Sidoo kale, tallaabooyinka xaddidan ayaa tartiib tartiib u dejin doona. Waqtigaan la joogo waa kan ugu muhiimsani dhammaan. Waxay dad badan siin kartaa dareen been ah in wax walba ay dhaceen oo ay ku nasan doonaan xagga cabbiraadaha, taasoo u horseedi karta kor u kac cusub oo ku yimaada qalooca cudurka. Sidaa darteed, nolosha ka dib xadhigan xaddidan waxay u beddelaysaa siyaabo badan waana inaad u diyaar garowdaa inaad wajahdo. Markaa ka dib ayaa aad badbaadi doontaa oo waliba taada ilaalin doontaa ...
1 Noocyada waji-furka iyo ilaalintiisa
1.1 Noocyada maaskaro
1.2 Jeermiska ka nadiifi masaska
2 Nadaafadda qofka
3 Daryeelka xayawaankaaga
Noocyada waji-furka iyo ilaalintiisa
ka waji duubashada waxay noqdeen badeecad aad qaali u ah, xitaa intaa ka sii badan hadda markii tallaabooyinka xabsiyada lagu bilaabay si tartiib tartiib ah loo furi doono dad badanna waa inay u baxaan shaqo, jimicsi, la socdaan carruurta yar yar, iwm. Dhibaatadu waxay tahay inay jirto baahi xoog leh iyo yaraanta weyn ee agabyadan ilaalinta shaqsiyadeed. Taasi waxay sababtay in qiimaha uu cirka isku shareero sida ugu badan 500% xaaladaha qaarkood.
Inkasta oo qaarkood ay ka faa’iideysanayaan sicir-xumada iyo sida ay u adag tahay in midkood la helo, waa inaad taas ogaataa dib looma isticmaali karo. Waa alaabooyin hal mar la isticmaalo waana in la tuuraa marka aad isticmaasho. Laakiin marka la eego yaraanta, maamulka ayaa ku baaqaya in iyaga laga nadiifiyo jeermiska oo dib loo isticmaalo. Wax aan caadi ahayn ...
Ku habboon ayaa noqon lahaa maaskaro shahaado haysta oo leh calaamadda CE-ga oo ay xukumaan heerarka Midowga Yurub ee noocyada ilaalinta noocan ah. Laakiin xilligan waxaad heli doontaa waji dabool fara badan oo ka imanaya Shiinaha oo aan lahayn dammaanadahaas.
Haddayna intaas ku filnayn, waa inaad ogaataa inay jiraan wajiyo badan oo dhammaantood waxtar uma leh ka-hortagga faafitaanka SARS-CoV-2. Waana muhiim inaad taqaanid iyaga si aanad ula yaabin oo aad u ogaato halista aad naftaada ama dadka kale u muujinayso iyadoo ku xidhan nooca maaskaro. Waa inaad horeyba u aragtay warka usoo booday warbaahinta ee kusaabsan dufcad waashooyin ah oo aan shaqeyn oo looqaybiyay musqulo badan.
FFP2 bilaa waal
FFP2 oo leh waalka
inta u dhaxaysa dhammaan noocyada waji-xidhka waxaad ka heli doontaa kuwan aan had iyo jeer waxtar u lahayn fayraska:
Nadaafad: looma tixgeliyo inay yihiin PPE (Qalabka Badbaadinta Shakhsiyeed). Waa inaad ka fogaataa iyaga dariiq walba. Waxay yihiin waji fudud oo aan lahayn shahaadada CE. Iyaga ayaad isku qaadsiin kartaa naftaada sidoo kale kuwa kale ayaad u qaadsiin kartaa.
Qalliin: waa kuwa caadiga ah ee loo qaybiyo dadweynaha, oo ka sameysan unugyo wanaagsan oo isku laaban. Waxaa jira dhowr nooc sida I, II iyo IIR. Sidoo kale iyagu maahan PPE waana in la tuuraa ka dib isticmaal keliya. Waxaa loo abuuray iyada oo loo marayo heerka EN 14683, waxayna u adeegaan oo kaliya si aadan u qaadsiin dadka kale, laakiin kaama hor istaagi doonaan inaad cudurka qaado.
Nooca FFP1: waxay kaa ilaalinayaan inaad dadka kale qaadsiiso, laakiin kaaama ilaalinayaan inaad isqaadsiiso sida qalliinka. Iyagu waa hal adeegsi, is-shaandhayn waana inay lahaadaan astaanta CE si ay u badbaado.
Nooca FFP2 bilaa waal: waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii la caddeeyo, maadaama ay kaa difaacayaan is-qaadsiinta iyo sidoo kale inay kaa ilaaliso inaad u gudbiso dadka kale haddii aad cudurka qabtid.
FFP2 oo leh waalka: oo la mid ah kii hore laakiin leh waalka waxaad ku faafin kartaa dadka kale adoo ka baxsanaya walxaha dhex mara waalka.
FFP3 oo leh waalka: oo la mid ah kuwii hore, way ka hortagi karaan is-qaadsiinta laakiin kama hor istaagi doonaan inaad dadka kale ku qaadsiiso waalka.
Maaskaro badh: iyaga ayaa ah kuwa kaliya ee liiska kujira ee dib loo isticmaali karo, waxaana loogu talagalay in loogu isticmaalo xirfad, sida rinjiyeyaasha ama kuwa gacanta ku haya waxyaabo kiimiko ah oo is bedbeddela. Waxay daboolayaan afka iyo sanka, waxayna ka hooseeyaan halbeegga EN 140. Xaaladdan oo kale waxay labadaba u adeegaan si looga fogaado is-qaadsiinta, laakiin kaama hor istaagi doonaan inaad ku sii gudbiso adigoo haysta aaladda fallaaraha.
Waxay sidoo kale awood u yeesheen inay wax arkaan qaar ka mid ah casharrada khadka tooska ah looga sameeyo si loogu sameeyo maaskaro guriga lagu sameeyo. Waa inaad iska ilaalisaa casharradan, maxaa yeelay natiijooyin badan ayaa keena waji-yar oo aan waxtar badan lahayn. Taasi waxay dadka u horseedi kartaa inay yeeshaan dareen been ah oo ilaalin ah oo ay khaladaadka qaarkood sameeyaan, sida inay aad ugu dhowaadaan dadka iyagoo aaminsan inay ilaalinayaan oo aysan ahayn ...
Jeermiska ka nadiifi masaska
Waxa aan la sameyn karin, laakiin waa in la sameeyo ayaa ah jeermiga jeermiska ku dhaji taasi waa kaliya hal adeegsi. Xaaladda yaraanta iyo ka-reebista ayaa ku qasbeysa in dib loo isticmaalo sababtoo ah waji-la'aan iyo sicir-xumada. Sidaa darteed, waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda si aad awood ugu yeelatid inaad dib u isticmaasho waji-dhawrka dhowr jeer:
Xulashada 1: Ku dhaq maaskaro weelka dharka lagu dhaqo heerkulkiisu yahay 60 - 90ºC. Kadib ha qalajiyo.
Xulashada 2aad: maaskarada ku qoy 1 litir oo biyo ah 20 ml oo ah warankiilo ah 30 daqiiqo. Ka dib ku dhaq saabuun iyo biyo oo u oggolow inay qalalaan.
Xulashada 3aad: isticmaal buufiyaha si aad ugu buufiso Virucidal ay fasaxday Wasaaradda Caafimaadka (Ecodyl, Vaprox, Bactoclean, dependence + On Virkon, iwm). Ka dib ku dhaq saabuun iyo biyo, oo ha qalajiyo.
Haddii aad ogaato inay leedahay dildilaac, ama nooc jabniin ah, markaa ma jiro wax kale oo aan ahayn in la tuuro maaskaro. Xaaladdaas, ma sii wadi kartid inaad dib u isticmaasho ama aad jeermis ugu disho.
La nadaafadda guriga iyo tan shaqsiyeed ayaa hadda ka muhiimsan sidii hore. Dhaqammada wanaagsan waa in lagu nadiifiyo gurigaaga iyadoo la isticmaalayo jeermis dileyaal sida warankii biyo ku milmay, ama in la isticmaalo masaxaadda jeermiska lagu dilo, jellada jeermiska disha, iwm. Xusuusnow in weelka dhaqida ee barnaamijkiisu yahay 60 digrii ama ka badan ay kaa caawin karto jeermiska haddii uu jiro qof jiran oo guriga jooga.
Tani waxay sidoo kale khuseysaa xirmooyinka ku soo dhaca warqadaha iyo alaabada aad iibsato Supermarket-ka, waa inaad sidoo kale midba mar uga nadiifisaa maro lagu rusheeyey xal biyo ah + warankiilo ah (saamiga 1 qeyb oo ah biliij ilaa ugu yaraan 50 qaybood oo biyo ah). Ka taxaddar cuntooyinka kale ee internetka ee jeermiska guryaha lagu sameeyo ee aan waxtar lahayn.
Nadaafaddaada shakhsi ahaaneed, waxaad horeyba u ogtahay waxa ay tahay inaad sameyso nidaam joogto ah isagoo tilmaamaya:
Xiritaanka fayruus si sax ah markasta oo aad taabatid dusha sare, gaar ahaan haddii ay yihiin dusha guud. Haddii aad taabatay dusha oo aadan dhaqi karin isla markiiba, iska ilaali taabashada sankaaga, afkaaga, ama indhahaaga illaa aad ka dhaqi karto. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa nooc ka mid ah jeelka jeermiska dila kaabis ahaan, laakiin beddel uma noqon kartid gacmo dhaqashada.
Waxaad gelin kartaa kabaha kaligood ku jira weel ay ku jiraan xal biyo ah iyo warankiilo aad ku diyaarisay albaabka si aad jeermiga ugu nadiifiso.
Fasax ka qaataan dharka oo uga tag banaanka dusha sare ama balakoonka aad ku haysatid saacado kooban. Markaa waad ku dhaqi kartaa mashiinka dharka lagu dhaqo oo leh barnaamijyo u dhexeeya 60 ilaa 90 disC si aad jeermiska ugu disho Haddii ay tahay dhar aan u dulqaadanayn heerkulkan, waxaad u isticmaali kartaa wax yar oo warankiilo ah habka dhaqidda.
Qubeyso markasta oo aad guriga gasho ka baxsan.
La gadhka ama timaha dhaadheer sidoo kale waxay noqon kartaa dhibaato hada.
Qaado ciddiyo gaagaaban waxay kaloo caawisaa in laga fogaado noodh kale oo uskaggu ku ururayo. Sidoo kale, haddii aad xiratid galoofis, ciddiyo dhaadheer ayaa jabin kara kuwa ka wanaagsan.
Ugu dambeyntii xayawaanka rabaayadda ahi waa inaysan iyagana dayacin. Iyagu ma ahan kuwo u nugul SARS-CoV-2, waxaa horey u jiray kiisas cudur faafin ah oo ka yimid xayawaannada fayraskan. Sidaa darteed, waa in la raaco tilmaamo iyo tusaalooyin taxane ah si wanaagooda loo damaanad qaado, gaar ahaan eeyaha aad u raacdo marka aad dibadda u baxaysid, halkaas oo fayrasyada guriga lagu geyn karo.
Waa inaad qaaddaa taxaddarro gaar ah oo aadan ula isticmaalin jel-dilayaasha qaarkood oo sababi kara gubasho ama xanaaq. Sidoo kale, ha ku buufin nooc kasta oo xal ah, maadaama ay u muuqdaan inay leefleefayaan jidhkooda oo ay ku liqi karaan kiimikada. Aagga sanka iyo afka waa aag kale oo xasaasi ah, mabda 'ahaanna waa inaadan ku nadiifin kiimiko. Ku qayb kaliya oo aad awoodid oo aad jeermiska kaqaadatid raacitaanka kadib waa lugaha, aagga suufka.
Si aad jeermiska ugu disho cirbadaha eyga waa inaad raac talaabooyinkan:
Kahor intaadan guriga gelin, waa inaad diyaarisaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u nadiifiso cirifka eeyga. Waa inaadan galin guriga oo aad cagta mariso dhammaan dusha sare ama aad fuusho alaabta guriga ama fadhiga salootada. Haddii aad leedahay irid yar ama beer, waxay noqon doontaa meesha ugu habboon ee laga sameeyo.
Diyaarso baaldi ama weel leh fayadhowrka. Waxaad haysataa dhowr ikhtiyaar oo aad ku dooran kartid habdhaqanka iyo adkeysiga xayawaankaaga, maaddaama qaarkood ay ku lug leeyihiin tallaabooyin dheeri ah oo dheeri ah:
Qiyaasta biliijka iyo biyaha 1:50. Xalkani waa ka la door bidaa uguna waxtarka badan. Waa mid aan xanaaq lahayn oo tirtira fayraska 100%. Waxaad ku sameyn kartaa 1 litir oo biyo ah iyo 20 ml oo ah warankiilo. Afarta lugood eeyga gasho oo waad dhameysay.
Khamriga 70:30. Waa beddel kale, laakiin xaaladdan waxay noqon kartaa mid xanaaq badan oo sun leh haddii eygu iskiis u leefleeco. Sidaa darteed, waa inaad isticmaashaa oo keliya haddii aadan fursad u helin inaad isticmaasho midka koowaad.
Saabuun iyo biyo. Waa beddel kale oo aan waxba galabsan oo kan hore ah, laakiin xoogaa gaabis ah. Haddii eeygaagu uusan weli joogin, waxay noqon kartaa mid ficil yar, maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad ku qoyso bawdada biyaha saabuunta leh, si aad u maydho ka dibna u qalajiso. Xalkan ayaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad nadiifiso wejigaaga iyo dabo haddii loo baahdo. Sidoo kale, xusuusnow inaad u isticmaasho jel gaar ah ama saabuun iyaga u gaar ah.
Ku dhaji cagaha eeyga xalkan oo hubi in aagga suufku si fiican loo qoyay.
Kadib waxaad ku qalajin kartaa lugaha lugaha maro ama shukumaan waxayna diyaar u tahay inay soo gasho. Xusuusnow inaad ku maydho tuwaalka xalalka jeermiska dila ama barnaamijyada wax lagu dhaqo ee 60ºC ama ka sareeya si aad u jeermis ugu dhigto sidoo kale.
Haddii ay dhacdo inaad aragto calaamado aan caadi ahayn ama nooc kasta oo dhibaatooyin ah, waa inaad ka hubi dhakhtarkaaga xoolaha sidaad ku heli lahayd duruuf kasta oo kale. Xirfadlayaashu waa kuwa ku siin doona talada ugu fiican ee lagu xaliyo dhibaatooyinka ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Ka maqnaanshaha guriga: tilmaamaha bixitaanka xilliyada masiibada
Tilmaam xilliyada cudurrada faafa: Maxaa dhacaya haddii aan bukoodo?
Fikradaha xayiraadda guriga
Ka hel wararkii ugu dambeeyay ee ragga labiskooda iyo qaab nololeedkooda emailkaaga.
Farsamada gacanta On
Dib u dhigista